इजरायल रोजगारी : अनलाइन आवेदन दिन समस्या भयो ? यसरी भर्नुहोस् फारम | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउन १४, २०७८ बिहिबार १५:१०:४० | उज्यालो सहकर्मी
वैदेशिक रोजगार विभागले सहायक कामदारको रूपमा इजरायलमा सरकारी तवर बाटै नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि मंगलबार आवेदन दिने सूचना जारी गरेको छ । इजरायल रोजगारीको लागि आवेदन दिने चाहनेहरूले सजिलै अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन सक्छन् । तर अनलाइनमार्फत आवेदन दिन विभिन्न समस्या भएको आवेदकले गुनासो गरिरहेका छन् । अनलाइनमार्फत सजिलै कसरी आवेदन दिन सकिन्छ त ? हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक श्रीचन्द्र साहलाई सोधेका छौँ ।
इजरायल रोजगारीका लागि सजिलै कसरी आवेदन दिने ?
इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा काम गर्न इच्छुक महिला र पुरुष दुवैले आवेदन दिन पाउँछन् ।
सरकारी तवर बाटै जाने कामदारको मासिक न्यूनतम तलब १६ सय डलर अर्थात् लगभग एक लाख ९० हजार रुपैयाँ हुन्छ । कामदारले लागत शुल्क भने एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ बुझाउन पर्छ । इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार नेपाली श्रमिक लैजाने छ ।
आवेदन भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
जसमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषहरूका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । इजरायल रोजगारीको लागि आवेदन दिनेहरूका लागि विभागले विभिन्न मापदण्डहरू तोकेको छ । निवेदन दिन इच्छुक व्यक्ति २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ केजी तौल आवश्यक पर्छ । अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भए इजरायलको स्थानीय भाषा अनिवार्य छैन ।
आवेदन दिन दुई तरिका अपनाउन सकिन्छ
फारम भर्ने तरिका जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
पहिलो : विभागको वेबसाइट dofe.gov.np यो विभागको वेबसाइट हो । यो खेलेपछि नयाँ समाचार भन्ने शीर्षक देखिन्छ । त्यहाँ नै इजरायल रोजगारीको लागि भनेर एउटा सूचना छ । त्यहाँ क्लिक गर्‍यो भने त्यहीबाट नै आवेदन दिने ठाउँमा पुगिन्छ । त्यसको नाम https://ferms.dofe.gov.np/israel/login हो । यसमा सिधै जाँदा पनि हुन्छ । अथवा विभागको वेबसाइटबाट सिधै जाँदा पनि हुन्छ । यसरी आवेदन दिने ठाउँमा तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ ।
साइट खुलिसकेपछि आवेदन कसरी भर्ने ? के कस्ता कागजात चाहिन्छ, के कस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ ?
आवेदन दिँदा जम्मा पाँच वटा सेक्सन छन् । एउटा व्यक्तिगत जानकारी(पर्सनल डिटेल) जहाँ आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीहरू राख्नुपर्छ । त्यसपछि आफूले अध्ययन गरेको शिक्षाको जानकारी राख्नपर्छ । अनि चाहिँ तालिमको जानकारी र फोटो, पासपोर्ट र नागरिकता अपलोड गर्ने ठाउँ पनि छ ।
पाठ्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
अर्को भनेको प्रि भ्यू हो । तपाईँले भर्नुभएको हरेक सेक्सनको प्रि भ्यू हेर्न मिल्छ । त्यसमा इडिटको विकल्प पनि छ । यदि यसअघि भरिएका केही विवरण सच्याउन परेको छ भने तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर गलत भएका कुनै पनि कुरालाई सच्चाउन सक्नुहुन्छ । यति गरिसकेपछि तपाईँ पुग्नुहुन्छ ‘सेल्फ डिक्लेरेसन’मा । यसको अर्थ के हो भने मैले यहाँ तोकिएका सबै कुरामा राजी छु भनेपछि फारम सबमिट हुन्छ ।
पासपोर्ट भ्यालिडिटी कतिको हुनुपर्छ ?
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको जुन सम्झौता छ त्यसमा श्रम स्वीकृति जुन बेला दिन्छौँ, त्यो बेला पासपोर्टको म्याद तीन वर्षको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ । यो अनिवार्य हो ।
तर आवेदन दिने बेला हामीले के सुविधा दियौँ भने कम्तीमा ६ महिना पासपोर्टको म्याद छ भने आवेदन दिन मिल्छ । हामी के बुझ्न पर्‍यो भने सिस्टममा छिर्नका लागि रजिस्ट्रेसन अनिवार्य छ । अर्थात् तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर, आफ्नो सेक्युरिटीको नम्बर के राख्ने, माेबाइल नम्बर र इमेल राख्नुपर्छ । यदि यी कुरा सबै सही छ भने बल्ल लगअन हुन्छ ।
यति लगअन भइसकेपछि मात्रै बल्ल तपाईँ सिस्टममा जानुहुन्छ । सिस्टममा लगअनको लागि यूजर आइडी भनेको तपाईँको पासपोर्ट नम्बर राख्न पर्‍यो । पासपोर्टमा जे उहाँले सिस्टममा सेभ गर्नुभएको छ त्यो राख्न पर्‍यो । त्यति गरेर स्टिम भित्र छिरेपछि त्यसमा विभिन्न कुराहरू आउँछन् ।
जस्तै पहिले इजरायलमा काम गर्नुभएको छ कि छैन ? छ या छैन भन्ने विकल्प आउँछ । त्यसमा छ भने तपाईँलाई सिस्टमले अघि बढ्न दिँदैन । यदि छैन भने मात्रै तपाईँलाई अघि बढ्न दिन्छ । त्यस्तै तपाईँका आफन्त(बुवा आमा, दाजुभाइ आदी) कोही इजरायलमा छ कि छैन त्यो पनि आउँछ त्यसमा पनि नो भयो भने मात्र अघि बढ्न दिन्छ ।
अब बाँकी कुरा भनेको तपाईँले त्यहाँ पासपोर्ट र जन्म मिति हालेर सर्च गर्नासाथ सबै तपाईँको विवरणहरू आउँछ । अर्थात् विभागको सिस्टम राहदानी विभागसँग पनि जोडिएको हुनाले स्वतः त्यहाँ विवरणहरू आउँछ । राहदानी विभागमा भएको विवरण आफैँ आउँछ । जस्तै नाम, उमेर, लिङ्ग लगायतका कुराहरू ।
नेपालीमा आफ्नो नाम के हो भनेर चाहिँ भर्न पर्छ । त्यहाँ मागिएको कुरा सबै अनिवार्य होइन । जस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्र आफूसँग छ भने नम्बर राख्ने हो छैन भने पर्दैन । त्यो बिना पनि फारम भर्न पाइन्छ ।
अर्को भनेको प्यान नम्बर । यो पनि छ भने मात्रै भर्ने हो । अर्थात् रातो टिक भएको कुराहरू चाहिँ अनिवार्य हो । जुनमा रातो टिक छैन ती कुराहरू छन् भने मात्र भर्ने हो छैन भने नभर्दा पनि हुन्छ । त्यो अनिवार्य होइन ।
फारम भर्दा गल्ती भयो भने फेरि भर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
जबसम्म सबमिट हुँदैन तबसम्म सिस्टममा भरिएका सबै कुराहरू सेभ भएर बसेका हुन्छन् । जस्तै मैले व्यक्तिगत जानकारी भरेँ । तर मैले शैक्षिक योग्यताको कागजात स्क्यान गरेको छैन भने सिस्टमबाट लगआउट भएँ भने फेरि पुन : लगअन गर्दा यसअघि भरेको विवरण सेभ भइरहेको हुन्छ ।
तपाईँले पुनः लगअन गरेर बाँकी कागजात र विवरण भर्न सक्नुहुन्छ । यो सुविधा हरेक चरणमा हुन्छ । फाइनल गरेर सबमिट नगर्दासम्म सबै विवरणहरू हुन्छन् । त्यस कारण हतारिएर भर्न आवश्यक छैन । बिस्तारै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भर्नुपर्छ ।
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
१. इजरायल रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमार्फत सजिलै भर्न सकिन्छ । विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिने लिङ्कमा पुग्न सकिन्छ । या सिधै आवेदन दिने लिङ्क मै क्लिक गर्दा पनि हुन्छ ।
२. आफ्नो नाम र सही मोबाइल नम्बर राखेर रजिस्टर्ड गर्ने ।
३. सिस्टममा गएर पासपोर्ट नम्बर र जन्म मिति सही राख्ने ।
४. आवेदकको पासपोर्टको म्याद कम्तीमा पनि ६ महिनाको हुन पर्छ ।
५. हाइट र तौल मिलेको हुनु पर्‍यो । नत्र आवेदन सबमिट नहुन सक्छ । अर्थात् इजरायल जानको लागि विभागले तोकेको मापदण्डहरु आफूले पुरा गरेको हुुनुपर्‍यो । योग्य हुन पर्‍यो ।
६. एसएलसी वा एसईई गरेको मानिसले अनमी वा सीएमए गरेको हुनपर्‍यो । तपाईँहरुले अनमी र सीएमएको नहाल्ने तर केयर गिभिङको हाल्नुभयो भने त्यो पाइँदैन । यसमा झुक्किन भएन । शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा एसईई गरेकाले अनमी वा सीएमए गरेको हुनपर्छ । प्लस्टु गरेको हुनुुहन्छ भने तपाईँले केयर गिभिङको तालिम लिएको हुन पर्‍यो । यसलाई सिस्टमले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ । त्यस कारण सही कागजात अपलोड गर्नुपर्छ ।
७. आफूले भरेका विवरण र राखेका कागजातको जाँच गरेर मात्र सबमिट गर्नुहोस् ।
८. फारम भर्ने क्रममा त्यहाँ राखिएको सूचना पढ्नुहोस् । ताकी फारममा गलत नहोस् ।
फारम कसरी भर्ने भनेर हामीले सूचना राखिदिएका छौँ । फारम भर्नुअघि त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि फारम भर्न कुनै समस्या भएमा या जानकारी चाहिएमा सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ । ११४१ नम्बरमा एनटिसीकाे नम्बरबाट निःशुल्क फोन गर्दा हुन्छ । एनसेल नम्बर चलाउनुहुन्छ भने भने ९८०१८०००१३ मा फोन गर्न सकिन्छ । यो नम्बरमा प्रक्रिया नबुझेमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
लगअन गर्ने ठाउँमा पनि सपोर्ट भनेर विकल्प राखिएको छ । त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ यी सम्पर्क नम्बरहरू पनि उपलब्ध छन् । यसका साथै त्यहाँ आफूलाई परेको समस्या, इमेल ठेगाना, फोन नम्बरसहित राख्नुहोस् ।
आफूलाई परेको समस्याको स्क्रिन सट पनि राखिदिनुभयो भने त्यहाँ भएको समस्या के हो र के गरेर मिलाउन सकिन्छ भनेर तत्कालै त्यसमा भएको गल्तीलाई सच्याउन सक्छौँ । यो चाहिँ सिस्टममा भएको समस्यामा मात्रै हो ।
Aug. 5, 2021, 5:44 p.m.
Thanks for the isreal and nepal embassy
Ichchha kala rai
Aug. 4, 2021, 12:54 p.m.
Aug. 2, 2021, 3:28 p.m.
I wanna go for Israel I need job so can I go there this for big opportunity thank you
Aug. 1, 2021, 10:10 p.m.
Aug. 1, 2021, 11:05 a.m.
Aug. 1, 2021, 8:55 a.m.
July 31, 2021, 5:25 p.m.
I want to go Israel working visa
Dipendra Bahadur thapa
July 31, 2021, 10:14 a.m.
वीर बाहादुर श्रेष्ठ
July 31, 2021, 1:16 a.m.
Kunsang Maya syantan
मलाई पनि इजरायल जान धेरै मन छ /
Rudra Bahadur gurung
July 30, 2021, 2:59 p.m.
July 30, 2021, 9:51 a.m.
I want to go isrel
July 30, 2021, 9:21 a.m.
महेन्द्र सिङ्ह बोहरा
July 30, 2021, 8:51 a.m.
मैले जति कोसिस गर्दा नि भर्नु सकिन यो पास्पोर्ट र नया पास्पोर्ट माग्छ तर त्यस्मा जे राख्दा नि भयेन किर्पया त्यो कसरी भर्ने जान्कारी पाये हुने थियो
July 30, 2021, 6:50 a.m.
July 30, 2021, 5:54 a.m.
I am very fond of illness people because i know how it feels to be taken care of . To be part of effort for someone for making their health strong is reallyapleasure for me and ensure their good health both physically and mentally. I am currently doing this now and be doing in future too.and i am very desperately seeking for job.i hope to getafine response from your company.
July 30, 2021,4a.m.
Thanks for the Israel and Nepal embassy
July 29, 2021, 10:33 p.m.
July 29, 2021, 9:45 p.m.
Krishna kant mandal
July 29, 2021, 7:40 p.m.
I haveapasport aim interested
July 29, 2021, 5:30 p.m.
Visa mag call me ra salary kati
July 29, 2021, 4:27 p.m.
July 29, 2021, 3:55 p.m.
Hello I'm sabi I went job.